Iwo matanhatu masheya ane njodzi pamusika weSpanish wemusika | Ehupfumi Zvemari
Iwo matanhatu masheya ane njodzi pamusika weSpanish wemusika
Tichitarisa kumberi kune rino gore ratichangotanga, pfungwa imwe chete yekuti vaongorori vakasiyana vezvemari varikutangisa ndeyekuti varimi vanofanirwa kusarudza zvakanyanya mukuumba kwavo kwechengetedzo uye vadzivise zvikumbiro zvemusika wemasheya kubva kuzvinhu zvine ngozi zvemari. Nekuti mukutarisana nemamiriro ezvinhu akashata, unogona kurasikirwa nezvakawanda kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, kune akateedzana ehunhu ayo parizvino ane huturu zvakanyanya kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waziva Uye chii mukati bearish mamiriro yemisika yemari inogona kusimudzira mafambiro akaomesesa senge arcades yegore rino.
Zvimwe zvekuchengetedzwa zvinosanganisirwa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yakasangana nekuderera kwakakosha kwazvo. pedyo ne50% mu2018 kunyangwe ikapfuura pazviitiko chaizvo chaizvo. Iyi mamiriro anogona kudzokororwa mugore rino uye nehukuru hwakanyanya kana shanduko yemisika yakatonyanya kushatisa kupfuura mugore rapfuura. Kuti udzivise matambudziko uchafanirwa kuona kuti ndedzipi tsika dzausingafanire kumira mumwedzi iri kuuya.
Kunyangwe iyo shanduko yeIbex 35 iri yeimwe, hazvireve kuti inoiswa kune ese akakosha emusika wekutengesa. Kwete zvishoma. Kune nguva dzose zvikamu izvo vane hanya zvakanyanya nekudzika (kana kusimuka) kupfuura mamwe ese. Iyi ndiyo imwe yemaitiro aunofanirwa kushandisa kubva ikozvino zvichienda mberi kugadzirisa yako inotevera yekudyara portfolio. Kuti ikubatsire kuita sarudzo yakanakisa, tiri kuzokuratidza kuti zvirevo zveyeti zviri panjodzi yekudzikira mumwedzi iri kuuya.
1 Maitiro ane njodzi: Zuva
2 Inditex ine kucheka kune simba
3 Sniace pamucheto wegomba rakadzika
4 Kuwedzeredzwa kwakawanda
5 Solaria, njodzi yako ndeye vertigo
6 Repsol inoenderana nemutengo wemafuta
Maitiro ane njodzi: Zuva
Kana parizvino paine kukosha kunonyatso kuratidza maitiro aya, zviri pachena iyi cheni yekugovera muzvikafu. Zvaakatangira hazvisi zvachose kubva mugore rapfuura inenge 60% yasara mukuyera kwemitengo yavo. Iri kutove nematambudziko akakomba kubhadharisa chikwereti chayo nemabhangi. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti Día chengetedzo iyo yakagamuchira kurohwa kutsva kubva kubazi Moody's, iyo yakadzikisa chiyero chechikwereti chayo uye yakachiisa mune yakasarudzika maonero nekuda kwekufungidzira kwekudzikira kwekuwana kwaro uye kushomeka matambudziko angamuka kana iwe ukasawana nzira nyowani dzemari.
Ebitda (inoshanda purofiti) yekambani ino yakanyorwa paIbex 35 yadonha ne24% mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore rapfuura, kusvika pamamiriyoni mazana maviri negumi nemasere euros, uye chikwereti chayo chinosvika 281 miriyoni. Kutengesa panguva iyoyo kwakaderera ne9%, chaizvo nekuda kwekuderera kwemari dzeArgentina neBrazil, kusvika pamamiriyoni mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematatu emamiriyoni; Pasina kuverenga maitiro emari, vangadai vakura 6.949% panguva ino. Mufambiro wakashata wekutenga zvikamu izvozvi. Nekuti zviripo, njodzi dzakakura kwazvo kupfuura mabhenefiti anogona kuunzwa nerudzi rwekushanda.
Inditex ine kucheka kune simba
Kunyangwe zvingashamisa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati, kambani yemachira ndiyo imwe yenjodzi mune ino musika wekutengesa. Izvi zvinoratidzwa nenhamba yakanaka yevaongorori vezvemari vanotaura kuti zano rakanakisa revashambadzi nderekutengesa zvikamu zvavo. Hazvishamisi kuti vanoratidza kuti vanogona vanotambura zvakanyanya kucheka mumwedzi mishoma inotevera. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Kune rimwe divi, zvakakosha kuti uzive kuti machira eGalician ari kuona mutengo wayo mumusika wemasheya uchichekwa nevamiriri vemari vakasiyana. Imwe yeakanyanya kukosha yakabva kuna Morgan Stanley, iyo yakaderedza mutengo wayo wekambani ne19%, kubva ku 26 euros pamberi pa 21 euros. Chimiro chinogona kusimba mugore idzva iri uye kusvika pakuve imwe yetsika dzakaipisisa yenguva iyi sezvo zvichiratidzwa kuti kugona kwayo kwekuongorora kwakapera mumakore apfuura.
Sniace pamucheto wegomba rakadzika
Pakati pemakambani madiki emari, imwe yezvinhu zvakaipisisa zvehunyanzvi hapana mubvunzo kemisitiri iri muCantabria. Usakanganwa kuti inongotengesa pa0,10 euros, asi nerwendo rwepasi rwune ngozi zvakanyanya uye kunetseka kupfuura nakare. Iine mukana wekutove wakakomba matambudziko kune mari. Mupfungwa iyi, Sniace anobva mukumiswa kwekubhadhara kwakaitika makore mashanu apfuura uye chave chimwe chezvinhu zvinokonzeresa kuti irasikirwe nechakanaka kukosha kwekukosha kwayakaita, semuenzaniso, makore gumi nemashanu kana makumi maviri apfuura.
Chero zvazvingaitika, chimwe chezviitiko icho vatengesi vadiki nepakati vanogona kufunga ndechekuti migove yekambani ino inowira kune kumiswa kwechinyorwa. Uye mune izvozvi, ivo vaizorasikirwa nezvipo zvese zvakaitwa nemutengo. Izvo hazvigone kwazvo kuti chiitiko ichi chinogona kukura mumakore mashoma anotevera. Kunyanya ichiona mari yakakomba iyo yainayo uye yakatungamira kukosheswa kwayo pamusika wemasheya isingapfuure iwo matanho e0,10 euros pamasheya. Imwe yemitengo yakaderera yemakambani akanyorwa pamisika yemari munyika medu.
Imwe yemasangano akajairika eiyi yakakosha kukosha pamusika wemasheya ndeyekuti yakawana akasiyana maitiro ekuwedzera mari mumakore apfuura. Wakatarisana nekudikanwa kuri kuitika kwe tsvaga mari mumisika yemari pachavo, sezvakaitika mumakore achangopfuura ekutengesa. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti imwe yemakambani madiki akanyorwa pamusika weSpanish wemusika, sezvazviri mune chaiyo Ercros, iri kupfuura nemamiriro akafanana uye saka imwe yeayo inofanirwa kungwarira kutora chinzvimbo. mune rino rakaoma gore rekudyara.
Kwete pasina, kana nechimwe chinhu ari kuzvisianisa Ercros mumwedzi ichangopfuura iri nekuda kwekunyanyisa kwayo kusagadzikana, kunyangwe mukati meakanyanya kudzika maitiro. Nemabasa akasimba kwazvo anoisa pangozi mashandiro evashambadzi vadiki nepakati. Ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda nekuvhura zvinzvimbo pane iyi kukosha, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete icho mari iwe yaunogona kuzvisiira iwe mune yega yega mashandiro aunoita mukati megore zvakare akakosha kwazvo.
Solaria, njodzi yako ndeye vertigo
Iyi kambani yakakwira zvakanyanya pamusoro pegore rapfuura zvekuti iyo kurwara kwehuremu zvinogona kuve zvechokwadi muchiitwa ichi. Hazvishamise kuti chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari vanofungidzira kuderedzwa kwakasimba muukoshi uye izvo zvinogona kutungamira kumatanho asingazivikanwe mumwedzi mitanhatu yadarika. Mushure mekuwongorora kwayo kwakasimba, hapana mubvunzo kuti kupinda kukosha kwacho kunotyisa. Kusvika pakuti iwe une zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Haisisiri iyo nguva yekuvhura zvinzvimbo mumiriri uyu wekuyenzana kwenyika yedu.
Kuchenjerera kwakakosha kunofanirwa kutorwa pamwe nemumiriri we Imwe nzira Stock Market (MAB) Eurona. Mushure mezvose, tarisiro yavo yese yekukura haina kuzadzikiswa, uye mune dzimwe nguva kunyangwe zvavo fungidziro isina tariro. Ichokwadi kuti yawa zvakanyanya mumusika wemasheya, asi zvirokwazvo inogona kuita zvakawanda kubva zvino zvichienda mberi. Iri kirasi remakambani ane mari diki yakadai inotungamirwa nezvinotarisirwa uye kana izvi zvikasasangana, zvinowira nesimba guru, zvinopfuura zvakajairika mune dzino zviitiko.
Repsol inoenderana nemutengo wemafuta
Chekupedzisira, kambani yemafuta yeSpain ichafanirwa kuiswa kwayo yega kunyangwe yaita mushe mumakore matatu apfuura. Izvi zvinokonzerwa nekufungidzirwa kwemutengo unodonha wedhiramu regoridhe dema uye izvo pasina mubvunzo zvaizokanganisa zvakanyanya kune imwe yekambani dzinongedzera yeinosarudzika indekisi yemari yenyika dzakadai Repsol. Sezvo masangano epasi rese achiverenga kuti mwero wesimba iri unogona kudonha gore rino kusvika pamatanho zvishoma pasi pemakumi mashanu emadhora dhiramu.
Kuvimba kwemasheya ekambani yemafuta emunyika nemari yemari iyi kwakanyanya uye izvi zvinoita kuti shanduko yayo mumisika yezvemari inyanye kupfuura vamwe vamiririri veIbex 35. Kupi rimwe zuva inokwira 5% uye imwe yacho inorasikirwa nechiyero chimwe chete kana yakatokwidziridzwa. Ehezve, hausi kukosha kwakanyarara kune vanoita mari vanozvidzivirira uye zvinoda moyo murefu kutsanangura zano rakakodzera nguva kuitira kuchengetedza mari kunobatsira mukurovedza muviri kwakaoma senge ikozvino.
Sezvawaona, kune misungo yakawanda iyo bhegi inokugadzirira iwe kwegore rino uye yaunofanirwa kunge uri kunze kwemwedzi inotevera. Sechirongwa chekudzivirira zviwanikwa zvako zvaunokoshesa. kudzamara uchizvitsanangura kuti mari ichengetedze inobatsira mukurovedza muviri seyakaomarara sezvinozoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iwo matanhatu masheya ane njodzi pamusika weSpanish wemusika